Batariga soconaya waarana soconaya ... | Androidsis
Zack | | Batariga, Mobiles, Noticias, Qalabka kale
Mudo intee le'eg ayuu batteriga casrigaaga socdaa? 12 saacadood ... 1 maalin dirqi ah?
Mid ka mid ah faa'iido darrooyinka haysashada taleefannada gacanta ee casriga ah oo leh adeegsi iyo adeegyo badan ayaa ah isticmaalka badan ee batteriga. Taasi waa sababta dukaamada khadka tooska ah aan uga heli karno tiro badan oo baytariyaal kale ah oo loogu talagalay Smartphone-keena Android. Maanta waxaan u imid inaan ka hadlo batteriga leh awoodda ugu sareysa ee aan helay.
Dukaanka dhexdiisa MyTrendyPhone.es waxaan ka heli karnaa kuwa cajiibka ah Batariga Galaxy S wax aan badnayn iyo wax aan ka yaraynba 3000mAh. Batariga ka soo baxa warshada Galaxy S waa 1500mAh.
Waxaan heleynaa batari tayo sare leh oo karti sare leh. Waxaa loo isticmaali karaa batariga beddelka waxaana lagu soo oogi karaa si la mid ah sida batteriga warshadda.
Waxaan isbarbar dhigay isticmaalka caadiga ah ee maalinlaha ah iyo batariga warshada iyo tan waana inaan qiraa inaan si layaab leh ula yaabay. Iyadoo batteriga warshadda oo la siinayo isticmaalkiisa caadiga ah: isku xirka 3G waqti ka waqti, laakiin inta badan waqtiga fasaxa, Wifi waa la damiyay, inta u dhexeysa cayaaraha iyo internetka 1 saacadood oo la isticmaalo, wicitaano, iwm. Saacadaha 12 batteriga waa 25% ama 30%. Si kastaba ha noqotee oo leh batterigan 3000mAh 12 saacadood gudahood wuxuu igu cunay oo keliya 30% Taasna waa la tirinayaa inaan ka tagay 3G markasta iyo marar badan waxaan ka dhigayay inuu ka shaqeeyo rakibidda barnaamijyada, iyadoo la adeegsanayo barnaamijyada Facebook, Google+, nooca, iwm.
Marka si fiican baytarigani wuxuu socon karaa ilaa laba ama saddex maalmood oo la isticmaalayo adigoon ku dallacin isticmaalka buuxa.
Batarigu wuxuu ku yimaadaa shaashadda u gaarka ah Smartphone-ka tan iyo inta cabirka jidhkiisu laba jeer ka buuran yahay batteriga caadiga ah. Batarigaan casriga ah wuxuu ku noqon doonaa xoogaa "cayillan".
Iyada oo ay taasi jirto, anigu ma arko wax cillado ah marka la barbar dhigo nolosha batteriga ee ay bixiso. Waxaan sidoo kale ogaanay inay leedahay qiimo weyn, kaliya € 25.60. Xaqiiqdii waa shey si sare loogu taliyay laga bilaabo Galaxy S ee qalabka.
Nota: (Batariga waxaa loogu talagalay Samsung Galaxy S waxaana lagu tijaabiyay Smartphone-kaas, in kastoo sidoo kale loo heli karo moodooyinka kale ee Smartphone-ka ah).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Batariga » Batariga waara oo sii jira ...
Waa maxay habka loo kafaala qaado bogga ugu jilicsan! Sidoo kale, moobilkaasi suuqa ayuu ku jiray muddo dheer si uu war uga dhigo! Si kastaba xaalku ha ahaadee haddii ay baytariyo u leeyihiin taleefannada gacanta cusub sida g.nexus….
Fiiri qoraalka dhamaadka maqaalka:
Fiiro gaar ah: "Batariga waxaa loogu talagalay Samsung Galaxy S waxaana lagu tijaabiyay Smartphone-kaas, in kasta oo sidoo kale loo heli karo moodooyinka kale ee Smartphone-ka ah."
Waxaa intaa dheer, batterigan waxaa loo heli karaa Nexus S, iyadoo farqiga u dhexeeya uu yahay 2800 Mah.
Hagaag markaa isku mid maahan, maahee? Waxay noqon doontaa isla soo saaraha, ama isla taxanaha, laakiin isku mid ma aha ...
Ka jawaab RFOG
oo maxaad doonaysaa in lagu meeleeyo boqolaalka baytari inay kaa tagto adiga oo qanacsan? maxaad u sameyn weyday qoraal hadaadan jeclayn?
Aniga ahaan saaxiibkaan saxda ah, galaxyada s2 ayaa soo socota 😀 «Waan ogahay inay jiraan kuwa badan oo ka awood badan, laakiin kani wuxuu noqon doonaa taleefankeygii ugu horreeyay ee ugu horreeya» waxaanan aad u xiiseynayaa inaan ku daro 3200Mah oo aan halkaas ku arkay
Maya, hadaad joojiso inaad aqriso isku mid maahan inaad tiraahdo "Batariga waxaa leh Samsung Galaxy S waxaana lagu tijaabiyay Smartphone-kaas, in kasta oo sidoo kale loo heli karo moodooyinka kale ee Smartphone" marka loo eego "Batariga waxaa leh SGS iyo ayaa lagu tijaabiyey Taleefankaas casriga ah, in kasta oo ay sidoo kale jiraan baytariyaal loogu daydo moodeellada kale ee casriga ah »
In kasta oo ay kula mid tahay adiga, haddana xitaa iskumid kama dhowa, wuu weydiisan karaa si fudud maxaa yeelay haddii aad S2 iyo S ku haysatid guriga oo aad rabto inaad u isticmaasho batteriga mid ama midka kale. (In kasta oo caqligu kuu sheego sababta oo ah daboolka gaarka ah, laakiin haye)
Iyo inaan kor u sii qaado, ma ogi haddii aan ku kalsoonahay heerkulka ay moobilladani helaan marka aad xoogaa yar oo bakoorad ah siiso, haddii baytari 3000mah ah kani aad buu uga sii sarrayn doonaa, gaar ahaan marka la amraya.
wixii aan ka akhriyey, abuuraha dunta ayaa leh baytari noocan ah, sax? Waxaad ku ridi kartaa xoogaa qabashada heerkulka bilaa camalka iyo buuxa.
Jawab Christian Rodriguez Barros
"Aniga kaliya ayaa i cunay"
Aniga uun baa i cunay.
Waxaan xiiseynayay batari leh awood sare GALAXY s2 muddo dheer, laakiin ma ogi ilaa xadka aan ugu kalsoonaan karo batteriga shirkad aan rasmi aheyn. Midka aniga igu dhacaa waa samsung 2000mah rasmiga ah laakiin waxaan u arkaa inay aad qaali ugu tahay kaliya 350mah oo ka badan tan keydka. Waxaa la sheegay inay kaliya tahay 20% batteri ka badan ... maxaa la sameeyaa?
Ku jawaab Blacxnight
Runtii waan ka helay tan iyo wixii ka sarreeya waxaan la yaabay nolosha batariga. Haddii aadan dhib ka qabin in taleefankaagu uu soo ifbaxaayo, waxaan kugula talinayaa inaad dhex marto bogga oo aad aragto batteriga si aad u aragto inuu ku qancinayo iyo in kale.
mid baan rabaa mb525-kayga (motorola defy)
TuPhoneShop. Qalabka loogu talagalay Kiisaska Blackberry, guryaha, ilaaliyayaasha, xeedho, baytariyada.
Waxaan haynaa noocyo kala duwan oo qalab ah, blackberry, kiisaska, xeedho, baytariyada, samaacadaha dhagaha, fiilooyinka, gacmo-la'aan, kiisaska blackberry, qalabka blackberry.
Sidoo kale wax walba qiimaha ugu fiican. Maraakiibta loo dirayo Spain oo dhan. Alaabooyinka leh damaanad 2 Sano ah. Waxaan bixinnaa qaansheegad. 100% ASAL AH.
Waxaan weydiistay, si aan u arko inay sifiican u socoto 😀
Batariga Samsung Galaxy S ma la jaan qaadi karaa Samsung Galaxy S2?
Ku jawaab Andrea Vasquez
Tani sifiican ayey usocotaa waa in la hubiyo in ay sii dheeraato iyo in loo baleeyo samsung galaxy ace
Saaxiib aad u fiican laakiin uma maleynaysid in madfacani uu raadinayo xeedho batteriga noocaas ah? maadaama ay wershadda qaadanayso 4 saacadood in la raro ama ka badan
Ku jawaab bassist